Shutter inowanikwa zvakare mune yepamutemo repamutemo yeUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Pese pandinotaura nezvazvo Shutter Ini ndinotanga nekutaura kuti ini ndashandisa chirongwa ichi uye kuti ndinochida nekuda kwemupepeti wadzo. Icho chaicho kutora skrini, asi mupepeti waro anotibvumidza isu kuvhura mifananidzo kubva ku hard drive yedu uye "kumaka" ivo kubva pairi. Nezvikonzero zvekuchengeteka, kutsamira kwakange kusisina kutsigirwa, masystem akaita seCanonical akaibvisa kubva kumahofisi avo epamutemo, saka waifanira kutendeukira kune vamwe kukwanisa kuiisa muUbuntu uye zvigadzirwa.
Munguva pfupi yapfuura, vhezheni yeShutter yakaonekwa pane Snapcraft, asi iyo snap package yakatemwa (chaizvo) yakatemwa. Iyo nhau dzanhasi ndeyekuti zvese zvinogadziriswa uye icho chakakurumbira chishandiso, icho chakarasikirwa nemhepo nekuda kwedambudziko iro, chave nacho yakawanikwa munzvimbo yepamutemo yekuchengetera, asi mukuru weprojekiti. Kunge tinokuudza mwedzi mishoma yapfuura, shanduko dzichangoburwa dzinokutendera iwe kuti udzokere kuzvinyorwa zveCanonical, asi ichi chinhu chisati chaitika izvozvi.
Iyo yakazara vhezheni yeShutter inowanikwa mune yayo yega PPA
Kugona kuisa Shutter 0.97 muUbuntu uye zvigadzirwa, ingovhura terminal uye nyora zvinotevera:
Kunyangwe mune chinyorwa chakapfuura ndakati shanduko dzayo dzichangoburwa dzakagadzira nzira yekuti idzokere kunzvimbo dzepamutemo dzeUbuntu, ini handina kufunga kuti iyo imwechete kambani inosimudzira iyo sisitimu yekushandisa ndiyo iri kuseri kweiyo Snap mapakeji. Zvichida nekuda kwechikonzero ichocho haasati adzoka. Shutter 0.97 inowanikwa mune yepamutemo Arch Linux repositories (nharaunda), saka hapana dambudziko nesoftware.
Kune avo vasina chavanoziva nezve Shutter, chishandiso chekutora skrini izvo yakatsiviwa neFlameshot pane mamwe masisitimu. Izvo hazvina kuvandudzwa munguva uye zvainge zvoda kufa, asi zvadzoka zviri zvipenyu kupfuura nakare kose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Shutter yadzoka mune yepamutemo Ubuntu repository, asi kwete Canonical parizvino
Iyo itsva vhezheni ye0 AD Alpha 25 Yaunā yakatoburitswa kare